गाउँघरमा चलेको एउटा उखान छ– ‘मन पर्‍या केटो, जेठाजु पर्‍यो ।’ ओली सरकारमा मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको स्थान र भूमिका त्यस्तै देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा जुन छुद्र वादविवाद भइरहेको हुन्छ- विपक्षी पार्टीहरुले होस् वा मिडियाले ज्ञवालीलाई तानेका छैनन् । ज्ञवालीको शालिन, बौद्धिक र भद्र व्यक्तित्वको अनुभूति सबैलाई भएजस्तो लाग्दछ । तर यदाकदा उनको त्यो व्यक्तित्व पनि भ्रम मात्र हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । त्यस्तै एउटा कारण बन्न पुगेको छ- उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति ।
उनले जसरी आलोचक मानिसलाई गिद्ध र कुकुरसँग तुलना गरेका छन्, के त्यो कुनै शालिन, भद्र र बौद्धिक अभिव्यक्ति हो ? कसलाई भनेको त्यो ? विपक्षी पार्टीलाई ? कुनैबेलाको विपक्षी एमाले, रत्नपार्कमा रेलिङ बाँच्ने एमाले, महिनौं संसद अवरोध गर्ने एमालेको तुलनामा अहिलेका कुन विपक्षी पार्टीले बितेको २ वर्षमा के त्यस्तो सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम गरेका छन् ?
मिडियालाई ? ज्ञवाली जत्तिको व्यक्तिले लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको चौथो अंगको भूमिकाबारे थाहा नभएको हो ? मिडियाले आज मात्र यसरी लेखेको हो, सत्ताको बारेमा ? हिजो पञ्चायत र कांग्रेसको शासनकालमा मिडियाले विरोध गर्दैनथ्यो ? मिडियाले वाचडगको भूमिका हिजो पनि गरेको थियो, आज पनि गर्दैछ, भोली अरु कोही सत्तामा आए पनि गर्दछ । के कमरेड ओली र ज्ञवालीहरुको शासनमा मिडियाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, चौथो अंग र खबरदारीको भूमिका छोड्नु पर्ने हो ? सायद त्यसो त हैन होला ?
फेरि त्यसो भए गिद्ध र कुकुर कसलाई भनेको ? जनतालाई हैन, पक्कै ती नागरिकलाई होला, जो सरकारका कतिपय कामसँग असन्तुष्ट छन् । बेलाबेला मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना दुखेसा र गुसाना पोख्छन् । यसरी लेख्दा कतिपय शब्द र हरफहरु नमिलेका हुँदा हुन् । कतिपय वाक्यहरु अलिक चर्का हुँदा हुन् । आम नागरिक लालित्यपूर्ण भाषामा लेख्न ज्ञवालीझैं साहित्यकार हैनन् होला ? त्यही कारण ती गिद्ध र कुकुर भए ?
मन्त्री कमरेड ! एउटा प्रश्न सोधौं– जनतालाई गिद्ध र कुकुर भन्ने अधिकार तपाईलाई कसले दियो ? लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै निर्वाचित शासकसँग सार्वभौम नागरिकलाई गिद्ध र कुकुर भनेर गाली गर्ने अधिकार हुन्छ ? कुनै समय तपाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्नु हुन्थ्यो, जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नु हुन्थ्यो, त्यही हो कम्युनिष्ट लोकतान्त्रिक भएको ? कम्युनिष्ट बहुदलीय जनवादी भएको ? आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको ब्याख्याता र उत्तराधिकार मान्ने तपाईको हृदयमा मदन भण्डारी छन कि स्टालिन ?
ओली सरकारका २ वर्षमा दजनौं शंकास्पद, विवादास्पद काण्डहरु भए । यी काण्डमा विपक्षी पार्टी, मिडिया र जनताले कुरा नउठाएको भए हाम्रो प्रणालीको मर्म बाँकी रहन्थ्यो ? गोकुल बाँस्कोटालाई ७० करोड माग्न, अभद्र बोल्न कसले उकासेको थियोे होला ? मिडियाले ? विपक्षी पार्टीले ? जनताले ? के त्यो अडियो विपक्षी दलले, मिडियाले जनताले बाँस्कोटालाई नाटक गर्न लगाएर रेकर्ड गरेको हो ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्नु, बोल्नु विपक्ष, मिडिया र नागरिकको अधिकार मात्र हैन, कर्तव्य पनि हो । ज्ञवालीजीहरुले बुझेको लोकतन्त्रमा यी पक्षको के भूमिका हुन्छ ? बहुमत पक्षले सरकार चलाउने हो । त्यो भूमिका अहिले नेकपाको हो । सबै प्रष्ट छन्– नेकपाको त्यो भूमिका अझै ३ वर्षका लागि निष्कष्ट छ । कसैले विरोध गरेर ओलीको सरकार ढल्ने हैन । ज्ञवालीजीको मन्त्री पद जाने हैन । गए नेकपाकै कारणले, त्यही भित्रको अन्तर्विरोधले जाने हो ।
विपक्ष, मिडिया र नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्छन् । त्यो भूमिका गर्न उनीलाई ओली–ज्ञवालीजीहरुको अनुमति चाहिँदैन । त्यो भूमिका लोकतन्त्रले स्वतः दिन्छ । मानौं कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको छैन, मन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नहरुको एकएक गरेर उत्तर दिए हुन्छ । फेरि गिद्ध को ? कुकर को ?
यस्ता अनेक काण्डहरु भएका छन्, बितेका २ वर्षमा जसको सरकारले कुनै चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेको छैन । ३३ किलो सुन कहाँ छ भनेर कसैले सोधे ज्ञवालीजी के उत्तर दिनु होला ? नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र झुठो हो भनेर सत्तारुढ सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा बोलेको ज्ञवालीजी के उत्तर दिनुहोला ? भो अरु धेरै प्रश्न नगरौं अहिले । यी काण्डमा मन्त्री ज्ञवालीको भूमिका, संलग्नता र नैतिक जिम्मेवारी कति हो, त्यो उनले नै जान्ने हो, सार्वजनिक बहसमा व्यक्तिगत हिसाबले उनलाई कसैले तानेको देखिन्न । उनले चलाईरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भो भन्ने पनि अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।
तर ज्ञवालीजीले बुझ्नुपर्ने केही कुरा छन्– तपाईलाई आजसम्म कसैले भ्रष्ट भनेको छैन । यदि विपक्ष, मिडिया र नागरिकको काम मन्त्रीलाई भ्रष्ट करार गर्दै हिंड्नु मात्र हो भने तपाईलाई किन भनेनन् कसैले ? सबैको ठेक्का तपाई लिन सक्नु हुन्छ ? अझ गम्भीर प्रश्न– यावत यी काण्डहरुबीच तपाई संलग्न भएको मन्त्रीमण्डलप्रति तपाईका चाहिँ कुनै नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ?
कोरोना प्रकोपबीच यस्तो वादविवाद सायद बाञ्छनीय हैन । तर फायर कस्ले खोल्दै त्यो पनि हेर्नु पर्छ ? फोहोरको पहाडमाथि बसेर कोही बाटो हिंड्नेलाई त्यही फोहोरको डल्लाले हिर्काउन थाल्छ भने सायद अरुले मात्र आइतबार पर्खिन जरुरी हुँदैन ।
अब एकक्षण ज्ञवालीजीकै मन्त्रालयसँग जोडिएको कुरा गरौं । विमस्टेकपछिको संयुक्त विज्ञप्तिमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको बुँदा कसरी आयो, दुई दिन नबित्दै त्यो हैन किन भन्नु पर्‍यो ? त्यसको भित्री रहस्य नागरिकलाई सुसूचित गर्नु भो कहिल्यै ? तपाई अमेरिका जाँदा इन्डोप्यासेफिकमा सामेल हुने भित्री वचन नदिनु भएको भए चीनको विदेश मन्त्रालयले किन प्रचण्डलाई भेटेपछि त्यसलाई जोडेर विज्ञप्ति निकाल्यो ? यसबारे प्रष्ट पार्नु भो कहिल्यै ?
एमसीसीबारे त्यत्रो विवाद हुँदा कहिले खुलेर बोल्न सक्नु भो सरकारको अडान ? आज तपाईकै पार्टीले त्यसमा त्यतिधेरै कमजोरी र संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा देखायो, त्यो बोल्न सक्नु भएको थियो ? एमसीसी विवादले के नेपालको छवि विश्वसामु राम्रो भयो ? यही तरिकाको डिलिङले राष्ट्रको विश्वसनीयता कायम रहन्छ ?
पछिल्लो कोरानोसँग जोडिएकै कुरा गरौं– डिसेम्बरमा वुहानमा कोरोना देखिएको थियो, त्यति नजिको छिमेकीबाट पर्याप्त सूचना लिन सक्नु भएन र जनवरीमा भ्रमण वर्षको समारोह गर्दै हुनुहुनथ्यो त्यो पनि चिनियाँ पर्यटकलाई लक्षित गरी ? खै सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता ? खै सूचनाको सही विश्लेषण ?
अहिले महामारी फैलिएमा त्यही चीनबाट पर्याप्त सहयोग लिनुपर्छ । तर, चीनसँग चुस्तदुरुस्त समयन्य गर्नुपर्ने यस्तो संकटको बीचमा राजदूत लिलामणिलाई फिर्ता बोलाउनु भयो । कसलाई के धन्दा, कसलाई के धन्दा, … लाई खानाको धन्दा भनेजस्तो यो बेमौसमको बाजा किन बजाएको छ ? उत्तर दिनुभएको छ जनतालाई ?
अहिले नेपाल–भारत सीमा नाकामा जुन समस्या देखिएको छ, त्यो भारत सरकारसँग समन्वयको अभाव हैन ? त्यो तपाईको मन्त्रालयसँग जोडिंदैन ? ला-लामो लकडाउनले रोजगारी र आम्दानी गुमाएका मान्छेहरु आफ्नो घर फर्किन नपाउनु ? बिमारी नै हुन भने उपचार गर्ने हो, क्वारेन्टाइन राख्ने हो, हिजो त्यही मान्छेहरुले हाड घोटेर पठाएको रेमिटेन्सले देश चलाउन मिल्यो, राज्य चलाउन र भत्ता खान मिल्यो । आज प्राकृतिक तथा मानवीय आपतविपत आइहाल्दा ती सबै अछुत भए ?
भारततिर लकडाउन थियो त ती कसरी सीमासम्म आए ? यति लामो खुल्ला सीमा व्यवस्थान गर्दा विश्वसनीय सल्लाह र समन्वय गर्नु पर्दैन ? यी प्रश्नको उत्तर कसले दिनुपर्ने हो ? लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता भन्ने एउटा विशेषता हुन्छ भन्ने कुनै वाक्य जनताको बहुदलीय जनवादको १४ विशेषताभित्र कतै छैन ?
दुःखको कुरा हो कि सत्ताको उन्मादले यदाकदा भद्र, शालिन र आशा गरिएका असल मान्छेहरुलाई अहंकारको गलत बाटोतिर प्रवृत्त गर्दछ । मन्त्री कमरेड ज्ञवाली ज्यू ! तपाईका गिद्ध र कुकुर जस्ता शब्दहरुले त्यही गलत बाटो तिरको अग्रसरताको संकेत गरेका छन् । विनम्र अनुरोध छ– कृपया आफ्नो मौलिक चरित्र र स्वभावमा फर्किनुस् ।
‘मैले बोलेको स्पष्ट भनाइ हुँदाहुँदै तोडमोड गरी राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएको छ’
नेत्रविक्रम चन्द समूहका केन्द्रीय नेता लेखराज गजमेर धुलिखेलबाट गिरफ्तार